Hydraulika Press, Air Compressor, Machine mankaleo - Hanrui
Manokana amin'ny famokarana fitaovana hydraulic, pneumatic, ary fitaovana hafa
Ny vokatra novokarina tao amin'ny orinasa misy anay dia nahazo mari-pankasitrahana momba ny kalitao
Mametraka hatrany ny kalitao amin'ny toerana voalohany ary manara-maso tsara ny kalitaon'ny vokatra isaky ny dingana.
Mpanamboatra matihanina ny vokatra compressor Hydraulika Air compressor Products efa ho 10 taona.
andiam-pampandrosoana sy famokarana rafitra mandeha ho azy indostrialy, fampandrosoana vokatra tsy mandeha amin'ny laoniny, famokarana, varotra ary serivisy ho iray amin'ireo orinasa ara-teknika.
Ny Suzhou Hanrui Electric Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny Faritanin'i Jiangsu, tanànan'ny rano mahafinaritra any atsimon'ny reniranon'i Yangtze, voahodidin'i Shanghai, Nanjing, Suzhou Xichang ary faritra an-tanàn-dehibe hafa…
andiam-pampandrosoana sy famokarana rafitra automatique indostrialy, fampiroboroboana vokatra automatique tsy manara-penitra, famokarana, varotra ary serivisy ...
Masinina manosotra ...
tsena any Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, Yangtze River Delta, Pearl River Delta, izay matetika ampiasaina amin'ny fanandramana fantsona toy ny fantsom-by tsy misy vy, fantsom-by, fantsom-boaloboka titanium, fantsom-barahina, fantsom-by aluminium. Ny paikadin'ny orinasa lehibe indrindra dia ny famokarana gazety hydraulic mba hanomezana tombony sy ...
Tsy azo soloina amin'ny indostrian'ny fanodinana fantsona izy io, indrindra amin'ny orinasa mpamokatra boiler, fanamafisana ny fitaovana fanamafisam-peo, ozinina manohana ny rivotra sy ny faritra misy ny fiara. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fantsona tsy misy fangarony toy ny fantsom-barahina, fantsom-by aluminium, fantsom-boankazo, fantsom-bozaka nikela, fantsona zirconium, fantsom-pirazanana, ...